Kuraa Jaarsoo - Wikipedia
Kuraa Jaarsoo abbaa gadaa Booranaa 71ffaa yoo ta'u gaafa Bitootessa 2, 2017 abbaa gadaa duraanii Guyyoo Gobbaarraa baallii fuudhun muudame. Sirni Baallii wal harkaa fuudhuu kun Ardaa Jilaa Badhaasatti dhuma ji'a Gurraandhalaa fi jalqaba Bitootessaa keessa torban tokkoof bakka hirmaatonnii argamanitti geggeeffame .
Seenaa Duubaa[edit | Lakkaddaa gulaali]
Kuraa Jarsoo yeroo abbaa gadaa ta'ee aangoo fudhatu nama waggaa 30 ti. Akka kanaan duubatti deebinee yoo lakkoofnu, Kuraan tilmaaman bara 1986 dhalate. Abbaa gadaa Kuraa nama barate yoo ta'u barnoota istaatistiiksitiin Yuunivarsiitii Hawaasatti waggaa lammaaffaa barachaa odoo jiruu addaan kutee Sirna Gadaa keessatti hirmaachuf murteessun gale.
Sirna Baalii Fuudhuu[edit | Lakkaddaa gulaali]
Akkaa aadaa Booranaatti, baallii kan wal harkaa fuudhamu icciitidhan bakka abbaan gadaa duraanii fi kaabinoonni isaa fi abbaa gadaan haaraa fi kaabinonnii isaa itti argamanitti geggeeffama. Warra kanaan alatti, namni kaan yoo iddoo sana dhaqe, sirni kun baayyee qulqullaa'aa waan ta'ef ni du'a jedhee amana Booranni. Kanaaf, uummanni inni kaan iddoo baallii wal harkaa fuudhurraa fagaatee taa'a.
↑ Meet Kura Jarso, the new Borana Abba Gadaa, dhihootti kan baname: Bitootessa 8, 2017
Retrieved from "https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuraa_Jaarsoo&oldid=29328"
Abboota Gadaa Booranaa
This page was last edited on 8 Bitootessa 2017, at 17:06.